Zimkhalele oshiye izingane ezincane zodwa | News24
Zimkhalele oshiye izingane ezincane zodwa
OWESIFAZANE oneminyaka engama24 ubudala wase Malangeni osolakala ngokuthi wavele wahamba washiya abantwana bakhe ababili abancane besele bodwana ngolwesihlanu olwedlule.
Kuthiwa amaphoyisa aseScottburgh athola umyalelo ukuba aphuthume endaweni yesehlakalo nalapho afika abikelwa khona ukuthi unina wezingane uzishiye wahamba wabhekisa amabombo eMlazi.
Usayitsheni Nonkululeko Mgqibisa wamaphoyisa aseMzinto Kanye noConstable Dillon Khamisa yibo ababphe lowesifazane lnovele enkantolo yaseScottburgh ngoMsombuluko.
Kuthiwa lomama ohlala endaweni eyaziwa ngokuthi ikwaGumede nalapho kuthiwa wayekade eyobheka khona indoda engubaba wezingane ezabe zishiywe zodwana. Lona wesifazane kuthiwa wabe eshiye ingane eneminyaka emithathu eyishiye ihleli nenenyanga eyodwa nje vo.
Ngokusho kokhulumela amaphoyisa uKaputeni Vincent Pandarum lona wesifazane wacela ukushiya izingane nodadewabo okuthiwa wanqaba wabe esevele ezilaxaza kanjalo wazishiya zihleli zodwa.
Amaphoyisa kuthiwa abe esehlela ukuba izingane zithathwe zasiwe endaweni ephephile lapho bezizothola khona ukunakekelwa okudingekalayo njengalokhu unina wazo esabhekene namacala okuzishiya budengwane.